Taliban waa inay sii daysaa la-hayste Mark Frerichs
Mark Frerichs oo ah askari howlgab ah oo u soo shaqeeyay ciidanka badda Mareykanka ayaa muddo laba sano ku siman afduub loo heystaa.
Frerichs, oo ah Ijineer dhismo kana soo jeeda magaalada Lombard ee gobolka Illinois, ayaa muddo dheer ka shaqeynayay Afghanistan, isaga oo wax ka fuliyay mashaariic faa’iido u leh dadka Afghanstan.
Sida ay sheegeen warbaahinta, waxaa la afduubtay 31-ki Jannaayo sannadki 2020-ki. Frerichs ayaa la rumeysanyahay in ay gacanta ku hayaan Taliban. Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa hadda ku yaboohday lacag dhan $5 milyan oo dollar oo loo ballan qaaday in la siin doono ciddii keenta xog ku saabsan halka lagu hayo, helitaanka iyo soo guryo-celinta Frerichs.
“Khalqal-gelinta amniga dadka Mareykanka ama qof kasta oo rayid ah waa wax aanan la aqbali karin, afduubkuna waa ficil cadawtinimo iyo nacasnimo gaara leh,” sidaa waxaa lagu yiri bayaan uu madaxweyne Joe Biden kasoo saaray Aqalka Cad. “Talibaan waa in ay si deg deg ah u sii deysaa Mark ka hor inta aysan ka fakarin rabitaankeeda xagga sharciga. Tani ma ahan wax laga gorgortamo.”
Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Ned Price ayaa mar kale ku celiyay, “Mareykanka wuxuu kusoo hadal qaaday kiiska Mark, kulan kasta oo lala yeeshay Taliban, waxaanan caddeynay in aqoonsiga sharci ee ay Talibaan raadineyso aysan suurtagali doonin in la tixgeliyo inta ay afduub u heystaan muwaadin Mareykan ah.” Sii deynta Frerichs’ waxay qeyb ka tahay waxyaabaha gun-dhigga u ah arrimaha aan ahmiyadda siineyno ee aanan laga gorgor-tami karin,” ayuu afhayeenku ku sheegay bayaanka kasoo baxay.
Price oo warka sii wata ayaa yiri “Waanu sii wadi doonnaa inaan farriimo cad cad u dirno hoggaanka Taliban: Si dhaqso ah oo nabad ah kusii daaya Mark isla markaana ka laabta falalka aad adka ku afduubaneysaan.
President Biden ayaa la hadlay Mark Frerichs iyo muwaadiniinta kale ee Mareykanka ee afduubka loo heysto ama si qaldan ugu xiran dibadda, iyaga iyo qoysaskooda iyo asxaabtooda, kuwaas oo hadda xamilaya murugta maqnaashooda: “Ogaada maamulkeyga wuxuu sii wadi doonaa inuu si adag u shaqeeyo, ilaa dalka lagu soo celinayo qof kasta oo Mareykan ah oo si xaq-darro ah loogu heysto afduub aysan raalli ka aheyn.